Iswiidhen oo qorsheyneysa inay ciidamo nabad-ilaalin u dirto Maali - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Alexander Karlsson / TT.
Iswiidhen oo qorsheyneysa inay ciidamo nabad-ilaalin u dirto Maali
La daabacay tisdag 18 februari 2014 kl 15.46
Dowladda ayaa hadda ku gudajirta qorshe ay ku eegeyso sidii ay suurtagal ugu noqon lahayd in ay ciidamo militeri ah u dirto dalka Maali, kuwaas oo qayb ka noqonaya hawlaha nabad-ilaalinta oo ay Qaramada Midoobey (QM) halkaas ka wadaan. Kooxda ciidamada iswiidhishka ka socda ayaa lagu wadaa in ay tiradoodu gaareyso ilaa laba boqol oo askari.
QM ayaa horay ugu soo diray dowladda Iswiidhen codsi ay kaga doonayaan hawlaha nabad-ilaalinta QM ugu deeqdo guuto ciidamo ah oo qaabbilsanaan doona hawlaha sirdoonka iyo xog-ururinta.
-Waxaan dooneynna in aan codsigaas ka bixino jawaab farxad leh, ayuu wasiirka arrimaha dibedda Carl Bildt.
Waxaa Carl Bildt laga soo xigtay in ay tirada ciidamadaasi gaari karaan ilaa ”dhawr boqol oo askari” iyo in aysan ahaan doonin kuwo dagaalka toos uga qaybqaata. Waxaase loo baahan karaa ciidan suga ammaanka ciidamada iswiidhishka.
Haddaba si ciidan loogu diro dalka Maali, waxaa loo baahan yahay go’aan uu baarlamaanku gaaro. Dowladduna waxay hadda ku hawllan tahay hindise baarlamaanka la horgeyn doono gu’ga foodda nagu soo haya.
-Waa inaan marka hore si dhab ah baaritaan ugu sameynnaa inta aanaan soo bandhigin hindisahaas, ayuu yiri Carl Bildt.
Xisbiyada Sooshiyaal-dimoqraadiga iyo Bidixda ayaa iyagu taageeri doona qorshaha ay dowladdu ciidamo ugu diri doonto dalka Maali.
Iswiidhen oo ciidamo sirdoon ah u direysa dalka Maali